रक्सी किन्न ठाँउ। "मेट्रो नगद र बोक्न" मा रक्सी
वाइन सधैं संसारको सबैभन्दा परिष्कृत वरिपरि धेरै देशहरूमा उपलब्ध छ जो legislator फ्रान्स, महंगा रक्सी द्वारा र एकै समयमा, छलफल गरिएको छ। एक रोचक तथ्य 1976 मा, वहाँ एक थियो जब कि रहिरहन्छ रक्सी टेस्टिङ उहाँले फ्रान्सेली र क्यालिफोर्नियाली मदिरा तुलना जहाँ पेरिस, मा, सबै भन्दा राम्रो, आफ्नो आश्चर्य, पछिल्लो गर्न मान्यता प्राप्त गरेका थिए। अर्को रोचक तथ्य - आहार 123 वर्ष पुरानो हुन बस्ने दुनिया, को सबैभन्दा लामो मध्ये एक छ, तेल, रक्सी र चकलेट समावेश गर्नुहोस्।
वाइन लाभ: यो सत्य हो?
वाइन, ठिक्क खपत, मानव शरीर लाभ ल्याउँछ। यसलाई मा एमिनो एसिड र रासायनिक यौगिकहरु शरीर को सामान्य कामकाज लागि आवश्यक छन्। दाखमद्य मानव स्वास्थ्य को लागि आवश्यक छ, जो जस्ता धेरै, समावेश छन्। यो खरिदको रक्सी स्थानको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
रक्सी कहाँ किन्न?
आज, रक्सी पिउने पेय किन्न सक्छन् कुनै पनि स्टोर, सुपरमार्केट, थोक हाइपरमार्के र पनि सडक stalls मा। विभिन्न ठाउँमा रक्सी पिउने पेय खरीद को सुविधाहरू विचार गर्नुहोस्। मा रक्सी "मेट्रो नगद र बोक्न" किन्न मोडेल को एक गर्न सकिँदैन।
विशाल चयन, उचित मूल्य र सुविधा। यो सबै एक सुपरमार्केट मा रक्सी खरीद बारे भने गर्न सकिन्छ। मा "मेट्रो नगद र कैर्री" रक्सी सधैं किन्न लाभदायक छ। रातो, सेतो, सुख्खा, अर्ध-सुक्खा, मिठाई, अर्ध-मीठा - कुनै पनि विकल्प उपलब्ध छ। विविधता replenishment निरन्तर हुन्छ, त्यसैले कुनै पनि रक्सी फेला बिल्कुल सही यहाँ हुन सक्छ।
साथै, मा "मेट्रो नगद र कैर्री" रक्सी मूल्यहरु आनंद से तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ। मदिरा को विशाल चयन विचार कुनै पनि पर्स को लागत मा प्रस्ताव गरिएको छ। तपाईं एउटा सस्तो र किफायती रक्सी र कलेक्टर एक 20 वर्ष ढिलाइ संग रूपमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। 11 800 rubles (CHATEAU ला Lagune) - उदाहरणका लागि, रक्सी को सस्ता बोतल 90 rubles, उच्चतम लागत लागि किनेको गर्न सकिन्छ।
सुपरमार्केट एक विशाल क्षेत्र छ र permeability धेरै उच्च छ कि दिइएको, तपाईं सधैं छूट र आकर्षक प्रस्तावहरू विभिन्न पाउन सक्नुहुन्छ। मा "मेट्रो नगद र बोक्न" रक्सी मा कार्य एकदम साधारण हो। एक साधारण घटना "1 + 1 = 3" यो स्टोर लागि सान्दर्भिक छ। महान पेय खरीद, तपाईं पनि बचत गर्नुहोस्।
तपाईं बस छैन भने प्रेम रक्सी, तर पनि लागू मादक पेय, थोक पसलहरु गर्न फेरि एक यात्रा - एक महान विचार। थोक मा रक्सी खरीद तपाईं एक लाभदायक लगानी गर्न अनुमति दिन्छ। रूस पर्याप्त मा थोक आउटलेटहरू। उदाहरणका लागि, रक्सी "मेट्रो नगद र कैर्री" मा थोक मूल्यहरु मा खरिद गर्न सकिन्छ।
धेरै पसलहरु तीन एकाइहरूको थोक प्रस्ताव। यसबाहेक, नेटवर्क को धेरै (अर्को खरिद मा थप किन्न, उच्च छुट) यस्तो आर्थिक सहायता प्रणाली खरिद गर्न छुट कार्ड जारी गर्न अनुमति दिन्छ।
खोखे र stalls
यस्तो ठाउँमा कुनै पनि अदालत मा, कुनै पनि बिसौनीमा पाउन सकिन्छ। आफ्नो peculiarity माल यो एउटा सानो रकम मा प्रस्तुत छ, तर धेरै फरक तथ्यलाई मा निहित। नियम, सुपरमार्केट मा भन्दा बिरालो मा सामान को लागत रूपमा। खोखे को फाइदा - एक सुविधाजनक स्थान मा। तथापि, धेरै केही मान्छे खरिद गर्न, विशेष गरी रक्सी को, यस्तो ठाउँमा सिफारिस गरिएको। अर्को कुरा - गुणस्तर र आफ्नो जीवन को ग्यारेन्टी सबै आवश्यकताहरू पूरा जहाँ मा "मेट्रो नगद र कैर्री", रक्सी।
एक रक्सी को लागि ध्यान गर्ने?
माथि, उल्लेख रूपमा रक्सी, - एक महान पेय, तर हरेक बोतल जस्तै सकिन्छ। जब रक्सी तिर्न ध्यान खरीद। उदाहरणका लागि, फ्रान्सेली, यो पेय को साँचो connoisseurs रूपमा, मिठाई वा semisweet एक प्राथमिकताओं छलफल। यसको वास्तविक स्वाद आकलन त्यहाँ चिनी वा sweetener को रूप मा कुनै additives हुँदा मामला हुन सक्छ। यी मदिरा कुनै पनि पकवान ठूलो साथै हुनेछ। पाचन र शरीरमा लाभदायक प्रभाव सुधार गर्न प्रयोग भोजन वा खाने 150-200 एमएल सुक्खा रातो वा सेतो रक्सी लागि स्वीकार गरे।
रुचि भोजन को लागि तिनीहरूलाई चयन, दुवै रातो र सेतो वाइन दिइएको छ। फ्रान्स, उच्च विद्यालय सानो मात्रा मा रक्सी स्वाद खाने लागि भोजन कक्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
वाइन "Psou": अब्खाजिया को खुशबूदार मदिरा
"Malvasia" (रक्सी): ग्राहक समीक्षा
के थाहा र रक्सी taster गर्न सक्षम हुनुपर्छ
"Pinot Grigio" - रक्सी, को गर्मी दिउँसो symbolizing
महिला बियर EVE: स्वाद र समीक्षा
घर रक्सी चेरी - स्टोर उत्पादनहरु लागि वैकल्पिक
सुझाव र समीक्षा: संभोग फिटिंग लागि एक बन्दूक कसरी चयन गर्न। संभोग फिटिंग किन्न लागि जो बन्दूक कम्पनीहरु
हकी प्लेयर युरी लेबेदेव: खेल उपलब्धिहरु
बेपत्ता पेशा: सूची। 2020 द्वारा जो पेशों गायब हुनेछ?